Maitiro ekufometa piritsi, ingave Android, iPad kana Windows
Maitiro ekugadzira piritsi
Paunenge uine piritsi, panogona kunge paine a nguva chaiyo painoda kufomatidzwa. Zvikonzero zvinoita kuti mushandisi aite fomati piritsi ravo rinogona kusiyana. Asi zvakakosha kuziva kuti izvi zvinogona kuitwa sei, kana zvichidikanwa.
Saka izvozvo ziva kuti ungafometa sei tablet. Kunyangwe uine Android kana imwe sisitimu yekushandisa. Matanho anogona kunge akasiyana. Asi pasi apa ndiyo nzira iyo inokwanisika kuzviita nayo.
1 Nguva yekugadzira piritsi
2 Fomati piritsi, unozviita sei?
2.1 Fomati Android piritsi
2.2 Chimiro chePacific
2.3 Format Windows 10 piritsi
3 Maitiro ekugadzira piritsi nemhando
4 Unogona kugadzira piritsi nemabhatani?
Nguva yekugadzira piritsi
Pane mamwe mamiriro ezvinhu aunogona kuve nyore kugadzira piritsi. Kunyangwe zvichifanirwa kutaurwa kutanga, kuti chokwadi chekugadzirisa icho chinofungidzira kuti data rese riri mairi rinobviswa. Naizvozvo, zvakakosha kuti utange waita kopi yedata iri.
Zvimwe unoda kutengesa tablet yakati pane imwe nguva. Nokudaro, zviri nyore kudzima data yose iri mairi, kuitira kuti munhu anoitenga arege kuwana chero ruzivo kubva kumuridzi wekare.
Kana paine kusashanda nayo, kufomatidza kunogona kubatsira kuzvigadzirisa. Kubva kana izvi zvaitwa, piritsi racho rinodzokera kumamiriro ekutanga, ayo akasiya fekitori. Saka matambudziko anosisira kuvapo. Izvi zvinogonawo kushandiswa muchiitiko kune chero hutachiona kana malware izvo zviri kukonzera matambudziko mukushanda kwayo.
Zvakare kana ichidzima nguva dzose kana kuti yakavharwa zvachose, kufomatidza kunogona kuve nzira yekuidzosera kune yekutanga uye kushanda zvakare. Kunyangwe pane zviitiko izvo zvinogona kureva kurasikirwa kweiyo data iri pahwendefa pachayo.
Fomati piritsi, unozviita sei?
Pazasi pane matanho ekutevera kufomati piritsi. Unogona kuva neimwe ine Android, iPad kana imwe ine Windows 10. Matanho ekutevera mune ese ari maviri anotsanangurwa.
Fomati Android piritsi
Kana zvauinazvo itablet yeAndroid, pane nzira mbiri dzekuita fomati mune zvimwe chetezvo. Kunyangwe zvinoenderana nekuti iwe unozviwana here kana kuti kwete nenzira yakajairika. Nokuti panogona kunge kune zviitiko apo tablet isingagoni kushandiswa. Chii chinoita kuti maitiro akasiyana.
Kana iyo tablet inogona kushandiswa zvakajairika, inofanirwa pinda marongero akafanana. Mukati mezvirongwa pane Android tablet pane kazhinji chikamu chinonzi factory data reset. Izvo zvinoenderana nemuenzaniso kana shanduro yehurongwa hwekushanda, sezvo mune dzimwe nguva inoonekwa zvakananga muzvirongwa. Nepo pane dzimwe nguva unofanirwa kupinda muchikamu.
Nekusarudza iyi sarudzo, zvese zviri patablet zvichadzimwa uye ichadzokera kumugariro wayo wapakuvamba. Painozotanga zvakare ichaita sekunge yakabva kufekitari.
Kana iwe usingakwanise kuwana piritsi kazhinji, iwe unofanirwa kupinda iyo yekudzoreredza modhi, senge mune ye Android smartphones. Chaunofanira kuita kuchengeta simba uye volume up mabhatani akadzvanywa. Panogona kunge paine mahwendefa ayo ari vhoriyamu pasi bhatani, zvinoenderana nerudzi. Paunenge uchiita izvi, mushure memasekondi mashoma chiratidzo chinowanzoonekwa kana piritsi rinodedera. Iwe unofanirwa kuramba wakadzvanya, kusvikira menyu yaonekwa pachiratidziri.
Ndiyo menyu yekudzoreredza, kwatine akati wandei sarudzo pachiratidziri. Imwe sarudzo yakadaro Factory Reser / Pukuta Dhata kana kudzoreredza, zvinoenderana nemutauro uye muenzaniso. Inofungidzira kuti zvese zvirimo zvichadzimwa. Iwe unogona kufamba pakati pezvisarudzo nevhoriyamu kumusoro mabhatani uye nekudaro sarudza iyo sarudzo. Iyo piritsi inozove yakazara fomati.
Tinokurudzira kuti kana yangofomatidzwa, enda ku gadziridza Android tablet kuti uwane zvigadziriso zvitsva uye kudzivirira chero glitches.
Sezvakaitika kune Android, ne iPad pane nzira mbiri kukwanisa kudzima data rese. Naizvozvo, vashandisi vanogona kusarudza iyo inovakodzera zvakanyanya, zvichienderana nemamiriro avo. Sezvakaita Android, zano ndere kuve nekuchengetedza data pahwendefa usati watanga maitiro.
Yekutanga ndiyo yakareruka pane mbiri. Iwe unofanirwa kuisa iyo iPad marongero uye ipapo iwe unofanirwa kupinda iyo general chikamu. Mukati mechikamu chino, pakati pezvisarudzo zviripo, imwe yacho ndeyekugadzirisa zvakare. Muchikamu chino unofanira kubva wadzvanya pa sarudzo yekudzima zviri mukati.
Izvi zvinotanga maitiro ekugadzirisa mudziyo. Mune zvimwe zviitiko, usati watanga chirongwa, inokumbira password kana Apple ID code. Saka unofanira kuipinza kuti ugone kuifomatidza. Kana zvisina kudaro, hazvibviri.
Nzira yechipiri ndeyekushandisa komputa. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuve neiyo yazvino vhezheni ye iTunes yakaiswa pairi, zvikasadaro hazvigoneke. Zvadaro, vhura iTunes pakombuta yako uye batanidza iyo iPad kwairi uchishandisa tambo yayo. Pane zviitiko apo meseji Vimba nekombuta iyi? kana kukumbira kodhi. Chero zvazvingava, unofanira kugamuchira kana kuisa kodhi.
Wobva wasarudza iyo iPad mu iTunes. Kazhinji, chirongwa chinoona mudziyo uye data rayo rinoonekwa pachiratidziri. Pahwindo, pane iyo iPad data, imwe yesarudzo ndeyekudzorera, pane bhatani rebhuruu. Iwe unozobvunzwa kuti usimbise kana izvi zviri izvo chaizvo zvaunoda kuita.
Naizvozvo, iwe unongofanirwa kuzvipa kubvuma uye iyo maitiro ekufometa achatanga. Saka data rese riri paPad richadzimwa. Kudzokera nenzira iyi kune imwe nyika iyo yakasiya fekitari.
Format Windows 10 piritsi
Chekupedzisira, kana uine piritsi ine Windows 10, maitiro acho akafanana neanoitwa pakombuta. Sezvo iwe uchifanira kupinda gadziriro yehwendefa. Ikoko tinowana zvikamu zvishoma. Must pinda inonzi Update and security.
Ipapo kune menyu kuruboshwe rwechidzitiro. Imwe yezvisarudzo mairi inonzi kupora. Tinodzvanya pachikamu ichi uye PC reset sarudzo. Ipapo iwe unofanirwa kudzvanya bhatani riri pachiratidziri.
Imwe yemabhenefiti ekugadzirisa piritsi ndeyekuti kana iri nekuda kwekutadza kushanda, fomati inotenderwa asi pasina kudzima data. Mushandisi anobvunzwa nguva dzese kuti ndeipi nzira yaanoda kusarudza.
Kana ukaronga kufomati piritsi kuti uisiye kufekitari nekuti uri kuenda kunotenga itsva, usazeza kushanyira webhusaiti yedu kuti tenga mahwendefa akachipa nekuti tinokupa zano kuti usarudze modhi inonyatsoenderana nezvido zvako.
Maitiro ekugadzira piritsi nemhando
Para gadzira piritsi uye woisiya isina data rako pachako, kana marongero, maapplication, nezvimwe, sepayakabva kufekitari, unogona kutevedzera aya matanho zvichienderana nerudzi rwauri kushandisa:
Samsung: kufometa Samsung piritsi unofanira kuenda Applications> Settings> General> Backup uye reset> Factory data reset> Reset foni> ipapo isa PIN yako kana pasiwedhi wobva wadzvanya Ramba. Pakupedzisira, ichakubvunza iwe kana uchifanira Kudzima zvese, bvuma uye maitiro achatanga. Kana yapera ichatangazve.
Lenovo: Iine piritsi rako rakabatidzwa, enda ku Settings> Factory data reset> ichakuratidza yambiro> Gadzirisa piritsi> uye ichatanga maitiro uye inopedzisira yatangazve kana yapera.
Huawei: kuseta zvakare piritsi iyi unofanirwa kuisa Zvirongwa kana Zvirongwa> Zvakavanzika> Factory Data Reset> ipapo maitiro ekufomati anotanga uye anodzokera kune zvigadziriso zvefekitori.
Amazon: yemhando iyi unogona kuenda kuZvirongwa> Sarudzo dzechishandiso> Dzosera zvigadziriso zvakagadzirirwa> Gadzirisa. Iye zvino maitiro anotanga uye kana atangazve, FireOS ichave yakachena zvachose.
Usati waenderera mberi, unofanirwa kuve nechokwadi kuti une a backup yedata yausingade kurasikirwa nayo.
Unogona kugadzira piritsi nemabhatani?
Kana zvichibvira fomati uchishandisa mabhatani. Izvi zvinobatsira kana sisitimu yekushandisa isingaite kana zvigadziriso hazvigone kuwanikwa nekuda kwechimwe chikonzero. Muchiitiko chino, unogona kushandisa mamwe maitiro:
Dzima piritsi rako, kana rakabatidzwa. Kana iwe ukaona kuti skrini haisi kudaira uye yakaomeswa nechando, unogona kubata bhatani remagetsi kwemasekonzi gumi kuti uimise.
Dzvanya bhatani repamusoro uye bhatani remagetsi panguva imwe chete kwemasekonzi mashoma.
Mirira kusvikira logo yaonekwa pachiratidziri.
Sunungura bhatani remagetsi uye ramba uchidzvanya bhatani repamusoro.
Ipapo iyo Android recovery system menyu ichaonekwa. Sunungura bhatani revhoriyamu, wava kukwanisa kushandisa mabhatani evhoriyamu +/- kufamba nemumenyu.
Sarudza iyo Wipe Data / Factory Reset sarudzo uye simbisa nebhatani remagetsi.
Pakupedzisira, mirira kuti tablet yako itangezve kufekitori yayo.
Iye zvino unenge uine piritsi rakarongwa uye rakagadzirira kushandisa. Asi iwe uchafanirwa kugadzirisa, kuisa mapurogiramu zvakare, nezvimwe.
Mahwendefa akadhura » Inotungamirira » Maitiro ekugadzira piritsi
Gadziridza Android Tablet
Android, Apple kana Windows? Ibva mukukahadzika
Maitiro eku dhawunirodha emahara mafirimu uye akateedzana pa iPad
Maitiro ekurodha YouTube Vhidhiyo paiPad
Maitiro eku dhawunirodha YouTube mavhidhiyo pane Android piritsi
Maonero epaTV patablet
Batanidza piritsi kuTV
Ndeipi hwakanakisisa piritsi?
Tafura yangu haibatike Zvekuita?
Chii chinonzi tablet?
Ndeipi piritsi yekutenga. Nhungamiro yekusarudza piritsi
WhatsApp pa tablet